မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း – Live the Dream
ဒီနေ့ မနက် အိပ်ယာနိုးနိုးချင်းမှာပဲ ကျွန်တော် ဒီနေ့ အတွက် article တစ်ပုဒ်ရေးဖို့ ရှိတယ်ဆိုတာ သတိရသွားတယ်။ ဒီလို နဲ့ ပဲ အိပ်ယာ ကထ ကိုယ်လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ်ပြီး article စရေးဖို့ စဉ်းစား လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာ ရဲ့ နာမည် “Live the Dream” ဆိုတာ ကို အကြိမ်ကြိမ် ရွတ်နေမိရင်း ကျွန်တော်ရဲ့ အတွေးတံခါးပေါက် ကြီးက ဝုန်းခနဲ ပွင့် လာတော့တာပါပဲ။
Live the Dream ကို လှလှလေး ဘာသာပြန်ရရင်တော့ “အိပ်မက်တွေကို ရှင်သန်စေပါ” ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တော်တော်များများမှာ အိပ်မက်တွေ ကိုယ် စီ ရှိကြမှာပါ။ တချို့ ကျတော့လည်း ငယ်ငယ် ကတည်းက ခိုင်မာတဲ့ အိပ်မက်ဆိုတာ ရှိနေပြီးသား။ တချို့ လည်း အိပ်မက်က အရွယ်အလိုက်ပြောင်းလဲနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချိုု့ လူငယ်တွေမှာလည်း အနာဂတ် အိပ်မက် ဆိုတာကို မယ်မယ်ရရ မရှိသေးတာလည်း ရှိမှာပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး က ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင် ကြတာပါပဲ။ စားဝတ်နေရေး ပြေလည်ချင်တယ်၊ လူတန်းစေ့ နေချင်ကြတယ်၊ သူများနောက် မကျန်ခဲ့ ချင်ဘူး၊ အလုပ်မှာ နေရာ တစ်နေရာ ရချင်တယ် စသဖြင့် ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဘဝကို ပိုပြီးတိုးတက်အောင် ကြိုးစားနေကြတာပါပဲ။
ဘဝမှာ တိုးတက်ချင်တဲ့ သူတွေတိုင်း က ကိုယ့်အကြောင်း ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိအောင် အရင် ကြိုးစား တတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့် ကိုကိုယ် သိဖို့ ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုယ့်ရဲ့ အကြောင်း ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှု တွေကို အရင် ဆန်းစစ် ကြည့်ဖို့ လိုအပ်မှာ အမှန်ပါ။ ဒါမှသာ အနာဂတ်မှာ ကိုယ်ဘယ်လို ရှေ့ဆက် မလဲ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်မလဲ ဘယ်အရာတွေကို ဆန်းစစ်ရမလဲ ဆိုတာ ကို ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော် …….
၁. ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း
အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကြည့်ခင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကို အရင်ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်လို့ ဆိုရာမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လို ပတ်ဝန်းကျင် ဘယ်လို အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ဝိုင်းရံထားမိစေလဲ ဆိုတာမျိုုးပေါ့။ တလောက ဖတ်မိတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ တွေ့ လိုက်တာ လူတွေက ကိုယ် ပေါင်းတဲ့ သူ ၅ယောက်မှာ ၄ယောက် နဲ့ ပုံစံ တူ စရိုက်တူ ဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့။ မြန်မာစကားပုံမှာတောင် “တံငါနားနီး တံငါ၊ မုဆိုးနားနီး မုဆိုး” လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ဟာ ဘဝမှာ တိုးတက်ချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ့်ကို အမြင့်ရောက်စေသူတွေနဲ့ အတူ ရှိနေရဲ့ လား ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လို ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းမျိုးမှာ ရောက်နေလဲ ဆိုတာ အရင်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
၂. ကိုယ့်ရဲ့ တွေးခေါ်ပုံ
နောက်ထပ် ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်တဲ့ အချက် ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိစ္စ တစ်ခုခု ဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု သို့ မဟုတ် ပြသနာ တစ်ခုခုကို အဖြေရှာတဲ့ အခါ ကိုယ်က ဘယ်လို စဉ်းစားလဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဥပမာ Facebook မှာ လူပြောများနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အကြောင်း ဆွေးနွေး ငြင်းခုံကြတဲ့ အခါ သူများတွေကြား ဝင်ယောင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ဖက်က ချက်ကျလက်ကျ နဲ့ ပြောပြနိုင်ဖို့ သေချာလေ့လာ ကြည့်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ် တွေ ရှုထောင့်တွေကလည်း ခေတ်နဲ့ အညီ လိုက်နေနိုင်ဖို့ က အထူးလိုအပ်ချက် တစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Critical thinking skill, logical thinking skill တွေကို တိုးတက်မှု အတွက် မိမိအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ လေ့လာထားလဲ ဆိုတာလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။
၃. ဘာတွေကို ဦးစားပေးမိလဲ
ဘဝမှာ မိမိအနေနဲ့ ဘာတွေကို ဦးစားပေးနေမိတယ် ဆိုတာလည်း တစ်ချက်လောက် စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါအုန်း…. လူငယ်ဘ၀ ဆိုတာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်၊ ရွေးချယ်စရာတွေလည်း များတယ်။ တစ်နေ့ နဲ့ တစ်နေ့ ကုန်သွားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘာတွေလုပ်နေမိလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဦးစားပေးမှု တွေအပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းတွေမှာ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စွမ်းအင် ပမာဏတွေ ရှိသလို လူတွေမှာ လည်း လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ energy တွေ ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တု့ိ ရဲ့ စွမ်းအင်တွေ ဟာ ကိုယ် အာရုံထား ဦးစားပေးတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေ ချစ်သူခင်သူ မိသားစု ကျောင်း အလုပ် စသဖြင့် ရွေးချယ်စရာတွေ ထဲမှာ မိမိ အနေနဲ့ ဘာကို ဦးစားပေး မလဲဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအတွက် ကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားဆုံး ဖြတ်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်
လူတိုင်းမှာ အားနည်းချက် အားသာချက်ဆိုတာ ရှိကြစမြဲပါပဲ။ လူသားတိုင်းက မပြည့်စုံတဲ့ သူတွေပဲ မို့ အားနည်းချက်ကတော့ ရှိကြမှာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အားသာချက် ဆိုတာ ကတော့ ကိုယ့်ကိုအပေါ် ရောက်အောင်တွန်းပို့ ပေးမဲ့ လှေကားထစ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည် ဆန်းစစ်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်း အားသာချက်ကို လည်း အထူးပြန်လည် ဆန်းစစ်သင့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ကိုယ်အားသန်ရာ စိတ်ပါရာ အလုပ်တစ်ခု ကို လုပ်နေရတဲ့ အခါမှာ ခွန်အား တွေ ပြည့်လာပြီး အကောင်းမြင်စိတ်တွေ motivation တွေရှိလာ ကြတယ်။ အဲဒီ စိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ ပဲ လူဟာ အလုပ်တစ်ခုခု ကို လုပ်ကိုင်မယ်ဆို တစ်ဝက်လောက်က အောင်မြင်နေပြီးသားပါ။
၅. သူငယ်ချင်းတွေက ဘယ်လိုမြင်လဲ
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်ကိုတိုင်က မသိဘဲ ကိုယ့်နား ပတ်ဝန်းကျင် က လူတွေက ပိုသိနေတာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မိသားစု လည်း ဖြစ်နိုင်သလို အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကို သူများကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူးဆိုသော်လည်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပို နားလည်ဖို့ အတွက် သူများအကြံဉာဏ် လည်း နားထောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ကို လမ်းပြတွဲခေါ်ပေးနိုင်မဲ့ စီနီယာ mentor တစ်ယောက် လောက်ကလည်း လူငယ်တိုင်းမှာ ရှိသင့်ပါတယ်။ အရှေ့ က လူတွေရဲ့ အမှားတွေ အတွေ့ အကြုံတွေ ဆိုတာဟာ နောက်လူတွေအတွက် သင်ခန်းစာကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်မှာ တိုးတက်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ မေးခွန်းကောင်းလေး နဲ့ အတူ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရင်း မိမိကိုယ်ကို ရှာဖွေနိုင်ကြပါစေ ကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။